Arakan Times – Page 30
33 nationals of Bangladesh obtain release from Myanmar prison
June 12, 2017	Leaveacomment 778 Views
AT Staff Report At least 33 Bangladeshi nationals have been released by Myanmar government from the prison of Thananthayi recently. The prisoners were identified as Bangladeshi nationals after verification by concerned authorities. They were pardoned by Myanmar government as it was requested by ambassador of Bangladesh based in Yangon. It is learnt that the 33 nationals detained in Myanmar jail ...
Myanmar soldiers destroy eight houses in Southern Maungdaw
June 12, 2017	Leaveacomment 1,363 Views
AT Correspondent, Maungdaw At least eight houses of Rohingya residents of PaYounBinGyi (Nayapara) village of Goduthaya union, Southern Maungdaw have been destroyed by Myanmar soldiers on 8 June 2017. Source said to our correspondent,agroup of army and BGP joint forces entered the village and demolished eight houses of Rohingya accusing them inamurder charge ofaman ...
AT Burmese စစ်တပ်များကရွှေ၊ငွေလုယက်ခြင်း၊အကြောင်းမဲ့ဖမ်း၍ရိုက်နှက်ခြင်း၊စစ်ဆေးရေးဂိတ်၌မဖွယ်မရာပြုလုပ်ခြင်း
June 10, 2017	Leaveacomment 605 Views
၁၀၊၆၊၂၀၁၇ခုနေ့တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့နယ်ခွဲပိုင် ကွမ်းသီးပင်အုပ်စုနံသာတောင်ရွာ၊လက်ဖွဲ့ကျရွာ၊သဲချောင်းအုပ်စုမိုဒီရွာတို့မှရိုဟင်ဂျာများကိုဖမ်းပြီးအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် နေအိမ်၌ရရာပစ္စည်းများလုယက်ခဲ့ပါသည်။ကွမ်းသီးပင်နေဦးနုရ်ဟာယာတ်(ဘ)ဟာလာမာဇီ၏နေအိမ်သို့ဝင်ရောက်ပြီးသေတ္တာဗီရိုများချိူးပစ်၍ကျပ်သိန်းပေါင်း၁၅၀တန်ရွှေငွေများလုယက်ရုံမကမူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၌ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုစွဲစွပ်၍ကျပ်သိန်း၄၀ဒဏ်ရိုက်ယူခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာသို့ဦးလီယာကောတ်အာလီ(ဘ)အော်လီဆာန်သည်မဟုတ်မမှန်ထူးခြားမှုများပေးပြီးရွာသားများကိုဒုက္ခပေးလေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။၎င်းသူကိုအာဏာပိုင်များကအမြဲစောင့်ရှောက်လျက်ရှိပါသည်။ တောင်ပြိုမြို့နယ်ခွဲအဝင်လမ်းတစ်လျှောက်၌စစ်ဆေးဂိတ်များရှိသည်။အဆိုပါဂိတ်တွင်အမျိူးသမီးများကိုကိုယ်ထိလက်ထိစစ်ဆေးခြင်း၊ဆိုင်ကယ်သမားများမှငွေညှစ်ခြင်း၊ငွေမပေးလျှင်ဆိုင်ကယ်သိမ်းပိုက်ခြင်း၊Receive ကဒ်မပါလျှင်ငွေညှစ်ခြင်း၊Receiveကဒ်ရှိရင်လည်းအိတ်နှိုက်ငွေလုယက်ခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိနေပါသည်။အဆိုပါဂိတ်တည်နေရာများမှာ ၁။သင်္ဘောလှ ၂။ ရဲအောင်ချောင်း ၃။မီးတိုက် ၄။တောင်ပြိုယာ ၅။တောင်ပြိုဝဲရပ် ၁ ၆။တောင်ပြိုဝဲရပ် ၂တို့ဖြစ်သည်။ ဤစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာနည်းမျိူးစုံဖြင့်ဒုက္ခပေးလျက်ရှိနေသည်မှာ၂လကျော်ပြီးဖြစ်ကြောင်းAT burmese သို့ဒေသခံများကပြောပါသည်။
Tarpaulin distributed among the cyclone affected unregistered Rohingya refugees in Kutupalong and Balukhali
June 9, 2017	Leaveacomment 888 Views
AT Staff Report The Nomijian Aftabi Foundation (NAF) and Social Aid (SA) have jointly distributed tarpaulins (plastic sheets) among the unregistered Rohingya refugees in Kutupalong and Balukhali Makeshifts under Ukhiya today,9June 2017. According to report, during the tarpaulin (plastic sheet) distribution to the refugees, the chairman and the secretary of NAF and the chairman of SA were present ...
June 8, 2017	Leaveacomment 689 Views
တောင်ပြိုလက်ဝဲ မြို့နယ်ခွဲ၊ဇီးပင်ချောင်းအခြေစိုက်နယ်ခြားစောင့်စခန်း၊အမှတ်(၁၀)ရှိ နယ်ခြားစောင့်နယ်မြေမှူးနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်၇၊၆၊၂၀၁၇ခုနေ့ည၁၁း၀၀နာရီအချိန်တွင်ဇီးပင်ချောင်းအုပ်စုမြောက်ရွာသို့ဝင်ပြီးဦးမာမတ်အာလီနေအိမ်မှကလေးနှစ်ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ခေါ်ယူသွား၍စခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ထိန်းသိမ်းခံရသူများမှာမောင်မုရ်ရှိတ်(ဘ)မာတာလီနှင့်ရုလ်အာမိန်(ဘ)မာမတ်အာလောမ်တို့ဖြစ်သည်။တဖန်အလယ်ရွာသို့လာပြီးမောင်မာမတ်၏နေအိမ်နံရံကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်အထဲဝင်၍မာမတ်(ဘ)ဆီးရာဒုလ်အိစ္စလာမ်၏မိခင်ဖြစ်သူ၏ကိုယ်လုံးကိုမွှေပြီးBodiesအတွင်းရှိငွေကျပ်၇သောင်းကိုလုယက်သည့်အပြင်သေတ္တာ၊ဗီရိုများကိုလည်းရိုက်ချိူးခဲ့ပါသည်။နေအိမ်မှခေါ်ယူသွားသူ ကလေးများကိုလမ်းပေါ်၌တွေ့ရှိ၍ဖမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုအကြောင်းပြကာငွေကျပ်၂သိန်းခွဲညှစ်ယူခဲ့ပါသည်။၎င်းမှတစ်ဆင့်ည၁း၀၀နာရီအချိန်တွင်အဆိုပါနယ်ခြားစောင့်များသည်ရေတွင်းပြင်ကျေးရွာသို့သွားရောက်ပြီးဦးဒိလ်ဒါရ်(ဘ)အီနူစ်၏နေအိမ်တံခါးချိူးပစ်ပြီးအဖိုးတန်ပစ္စည်းများနှင့်ငွေများလုယက်ခဲ့သည့်အပြင်ဦးတာဟဲရ်(ဘ)အာမတ်ဟူစိန်နှင့်ဇာဖောရ်(ဘ)ဆွေယောတ်တို့ကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ခေါ်ယူလာ၍စခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားလျက်ငွေကျပ်၃သိန်းညှစ်ယူခဲ့ပါကြောင်းAT Burmeseသို့ရွာသားတစ်ဦးကပြောပါသည်။
12 injured by thunder strike in Balukhali camp
June 8, 2017	Leaveacomment 828 Views
AT Correspondent, Ukhiya Ukhiya – At least twelve Rohingya refugees received injuries afteralighting strike in Balukhali makeshift of Ukhiya, Cox’s Bazar on Wednesday last. The victims were known as Bi bi and Sufira daughter of Hamid Hussain, Ibrahim son of Nur Kamal, Rehena Begum D/O Zahid Hussain, Masud son of Zafar Alam, Mama Shohel son of Anwar, Hamida ...
NAFSA distributes food packages among unregistered refugees in Balukhali
June 8, 2017	Leaveacomment 980 Views
AT Correspondent, Ukhiya Nomijian Aftabi Foundation and Social Aid, Cox’s Bazar has distributed some 1500 food packages among the needy Rohingya unregistered refugee families in Balukhali makeshift today 8 June 2017. Source said to our correspondent, the food aids have been distributed to the Rohingya refugees particularly to those who have fled to Bangladesh after the9October attack on ...
Myanmar army plane disappeared over Andaman Sea
June 7, 2017	Leaveacomment 751 Views
AT Online Report A Myanmar military plane has gone missing which was flying between the Southern city of Myeik and Yangon and the salvation works are going on. The army said inastatement that communication was suddenly lost at about 1.35 pm when the plane reached about 20 miles west of Dawei Township. The plane,aY8 transport ...
June 7, 2017	Leaveacomment 622 Views
မင်းပြားမြို့နယ်၊ဟာဒါရွာနေဦးဆွေတာမိန်၊အသက်၅၅နှစ် သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးသည်၆၊၆၊၂၀၁၇ခုနေ့ညနေ၄း၀၀နာရီတွင်နွားကျောင်းနေစဉ်စစ်ကြောင်းနှင့်ရခိုင်အစွန်းရောက်တို့ကပူးပေါင်း၍လွန်စွာရိုက်နှက်မှုကြောင့်သတိလစ်လပ်လျက်ရှိပြီးအသက်ရှင်မည့်မျှော်လင့်ချက်နည်းပါးသွားသည့်။၎င်းသူ၏လက်တစ်ဖက်ကိုလည်းချိူးပစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်တစ်ခုလုံးတွင်ရိုဟင်ဂျာများကိုမြန့်မာ့အာဏာပိုင်များကရရာနည်းနှင့်စော်ကားခြင်း၊ရက်စက်ခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းAT correspondentမှသတင်းပေးပို့ထားပါသည်။
June 7, 2017	Leaveacomment 613 Views
ရခိုင်ပြည်၊ဘူးသီးတောင်မြို့ရှိအကျဉ်းထောင်တွင်ထောင်ပိုင် လက်ထောက်ညွှန်းကြားရေးမှူးဦးမင်းမောင်၊ကိုယ်ပိုင်အမှတ်၃၀၅၅ကရိုဟင်ဂျာများကို တန်းစီးရာတွင် တန်းစီးထားရမည့်အချိန်ထက်လွန်စွာတန်းစီးစေ၍ငွေညှစ်ရန်ကြံရွယ်ခြင်း၊အစာရေဆာများကိုလျော့ပေးခြင်း၊ပုံမှန်အစာမပေးခြင်း၊ငွေအလို့ငှာတိုက်အတွင်းထည့်သွင်းထားခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းထောင်မှလွတ်လာသူတစ်ဦးကAT Burmeseသို့ပြောပါသည်။ တန်းစီရာတွင်နံနက်စောစောကပင်၁၀း၀၀တိုင်နေပူ၌ရပ်တန့်စေခြင်း၊အစာမလုံလောက်စွာပေးခြင်း၊ငွေအတွက်တိုက်အတွင်းလူ၆၀ဦးခန့်ကိုငွေတောင်းခံရင်းထိန်းထားခြင်းစသည့်များအားသက်ဆိုင်ရာလူကြီးများအနေဖြင့်လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ပေးပါရန်AT Media၌ရေးသားအပ်ပါသည်။